နိုင်ငံရေး ဆေးမြီးတို (ရှင်လူ လက်သရမ်းသည်) – iSeeMedia
နိုင်ငံရေး ဆေးမြီးတို (ရှင်လူ လက်သရမ်းသည်)
ခုတလော မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် မိုးကလေးကလည်း တစိမ့်စိမ့်။ ဇွန်လ ၂၂ ရက်ကတည်းက လျှပ်စစ်မီးကလည်း ပုံမှန်ပြန်ရပြီဆိုတော့ ရှင်လူကြီးအဖို့ သာသာယာယာပေါ့ လို့ ပြောချင်ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လျှပ်စစ်မီးက ပုံမှန်ပြန်လာတာ ရိုးရိုးမလာ၊ ဆတိုးမီတာတွေပါ အဖော်ခေါ်လာခဲ့လေတော့ အချိန်မှန်မှန်လာနေတဲ့မီးကိုပင် ငြိုငြင်စိတ်ထားနဲ့ မုန်းမာန်ပွားရတော့မလိုလို အခြေအနေကြီးက သိန်းတသောင်းခွဲဆုကြီးပေါက်ပြီးမှ အရက်ထဲ အဆိပ်ခတ်ခံလိုက်ရတဲ့လူလို မချိမဆန့် လျှာတစ်လစ်ထွက် သေပြရတော့မလိုချည်းပါလား အရပ်ကတို့ရေ။ အင်း တဖက်ကပြန်ပြီး ဖြေတွေး တွေးရရင်လည်း မီတာခနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်တိုင်းသာ သေရမယ်ဆိုရင် ရှင်လူတို့ ဒူးတင်ပေါင်တင် ရပ်ကွက်ထဲမှာ အသက် ၆၀ ကျော်တဲ့သူတွေ တယောက်မှ ရှိတော့မှာမဟုတ်။ အဲတော့လည်း ဖေ့စဖုတ်ပေါ်မှာ ဆဲနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက်လည်း သိ်ပ်ပြီး မပူပင်မိတော့။ ဒီလူတွေ ဒီနေ့ထိ မီတာတက်ပြီးမသေလို့ Status တွေ Commnt တွေ တင်နိုင်သေးတာပဲလေ။ တခုပဲပြောစရာရှိတာက ဟို မီတာဓားပြတွေသုံးထားသမျှကိုပါ ရှင်လူတို့က ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတာကိုတော့ သိပ်ပြီးအစာမကြေချင်။
”ဆရာ ဘာတွေ တွေးငေးနေတာလဲဗျ”
ရှင်လူ အတွေးကောင်းနေတုန်း ခြံထဲ စက်ဘီးတွန်း ဝင်လာတဲ့ တပည့်ကျော် ပကိဏ်းလူအသံကြောင့် ရှင်လူ သူ့ကိုမော့ကြည့်လိုက်ရင်း
”ဒီလိုပါပဲကွာ၊ တောင်တွေး မြောက်တွေးပေါ့”
”အဲဒါဆို နောက်ထပ်ဆက်တွေးစရာတွေကျနော့မှာပါလာလို့ အတော်ပဲ”
”မင်း မျက်ခွက်ကြီးမြင်ကတည်းကသိပါတယ်ကွာ၊ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းပြောသလို၊ငါတို့မြန်မာတွေက သေမလား၊ တွေးမလားဆို တွေးတော့မတွေးချင်ဘူး အသေသာခံသွားမယ်ဆိုတာ၊ မင်းလည်း တူတူပဲ”
”ဒီလိုတော့ မနှိပ်ကွပ်ပါနဲ့ ဆရာရယ်၊ ဆရာ့ကို ဆရာတင်ထားမှတော့ အရာရာ ဆရာရှင်းပြမှ ဆရာ့တာဝန်”
”ဟယောင် တော်တော့၊ မင်း လုပ်တာနဲ့ ငါ့ကိုယ်ငါတာင် ထိုင်ရှိခိုးချင်လာပြီ၊ ပြောစမ်းပါအုံး မင်းကိစ္စက”
”ကျနော့်ကိစ္စရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူးဆရာရယ်၊ တလောတုန်းက သတင်းစာမှာပါတဲ့ သတင်းတခုအကြောင်းမေးချင်လို့ပါ”
”ရုံးတက်တဲ့အခါ တရားသူကြီးတွေ ကျမ်းကျိန်ရမယ်လို့ လွှတ်တော်ကဆုံး ဖြတ်သတဲ့၊ အဲဒါ.. မကောင်းဘူးလား”
”ကောင်းမကောင်းထက် လိုအပ် မလိုအပ် မေးရင်ပိုရှင်းမယ်”
”မဗျာနဲ့လေ ၊တရားသူကြီးပါ ဆိုမှ သူ့ကိုယ်သူ ကျနော်ကဘုရားစူး မိုးကြိုးပစ် တရားသူကြီးပါခင်ဗျာ လို့ ဇာတ်ကသလို ရွတ်ဆိုနေဖို့ လိုသေးသလား”
”အမ်..ဒါဆို လွှတ်တော်က ဘာလို့”
”အေး ..လွှတ်တော်ကလည်း တခြားနည်းလမ်း မတွေ့လို့၊ ဒါမှမဟုတ် မလုပ်နိုင်သေးလို့ လတ်တလောကောက်လုပ်လိုက်ရတာပဲ”
”အင်း..မင်း ပုဂံညှပ်ကြီး အကြောင်းကြားဖူးသလား”
”အလောင်းစည်သူ လက်ထက်မှာ ပေါ့ကွာ၊ နတ်တွေစောင့်ရှောက်တဲ့ ညှပ်ကြီးဆိုတာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးသတဲ့၊အဲဒါ အငြင်းပွားတဲ့ မှုခင်းတွေဘာတွေဖြစ်ရင် တရားလိုတရားခံ နှစ်ယောက်စလုံး ညှပ်ကြီးထဲ လက်ထည့်ပြီး သစ္စာဆိုရသတဲ့၊ အဲဒါ လိမ်လည်ထွက်ဆိုတဲ့ လူရဲ့လက်ကိုညှပ်ကြီးက ဖြတ်ပစ်သတဲ့”
”ဘာ..ကောင်းတာလဲ၊ ဖိုးသူတော် ရွှေလိမ်တဲ့အမှုမှာ ညှပ်ကြီးသိက္ခာကျတာပဲ၊ မင်းလည်းကြားဖူးမှာပေါ့”
”အေး..တနေ့မှာ မယ်သူတော်တပါးဟာ ဖိုးသူတော်ဆီမှာ လက်စွပ်တကွင်း အပ်ထားတာကို ပြန်တာင်းတော့ ဖိုးသူတော်က မအပ်ပါဘူးဆိုပြီး ဗြောင်လိမ်တဲ့အမှု”
”အေး အဲဒါ ဖိုးသူတော်ညှပ်ကြီးထဲလက်ထည့်ကျိန်ခါနီးတော့ မယ်သူတော်ကို ရော့ ငါ့တောင်ဝှေးခဏကိုင်ထားဆိုပြီး ပေးပြီးမှကျွန်ုပ်သည်သူ၏လက်စွပ်ကို သူ့အားပြန်ပေးပြီးပါပြီ လို့ကျိန်ဆိုသတဲ့။
ခုနတောင်ဝှေးထဲမှာမယ်သူတော်လက်စွပ်ကို ထည့်ထားတာဆိုတော့ ဥပဒေကြောင်းအရ မှန်နေပြီလေ၊ဒီတော့ ညှပ်ကြီးလည်းဟတ်ကော့ကြီးဖြစ်ပြီး ဖိုးသူတော်ကိုမညှပ်နိုင်တော့ဘူး၊ဒီတော့မှ ဖိုးသူတော်က တွေ့ပလားဆိုတဲ့အထာနဲ့ ပေးပေး ငါ့တောင်ဝှေးဆိုပြီး လစ်ကရော”
”အေး..တရားဥပဒေကတော့ ညှပ်ကြီးအတိုင်းပဲ၊ဒီနေရာမှာ ရှေ့နေတို့ တရားသူကြီးတို့ ရဲတို့ရဲ့ အရေးပါမှုလိုအပ်လာတယ်”
”အင်း..အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလာရင်တော့ ဖိုးသူတော်တော့ နောက်ထပ် ဖိုတွမ်တီးနဲ့ လက်နှစ်ဘက်လုံးဂွိသွားနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် တရားသူကြီးတွေ ကိုကျမ်းကျိန် ခိုင်း…ခိုင်း”
”လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ရေးလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ် ဆန္ဒ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ ဘယာဆိုတဲ့အဂတိလေးပါးဟာ ပြောရရင်အကျယ်ကြီးပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ အတိုချုပ်ပြောရရင် အဲဒီ အဂတိတွေနဲ့ လွတ်တဲ့နေရာ ငါတို့ဆီမှာ ဘယ်လောက်များများရှိသလဲ၊ ဘာလို့ နေရာတကာမှာ အဂတိတွေများပြီး တရားဥပဒေမထွန်းကားသလဲ”
”အင်း..ဆရာပြောလိုက်မှ တနိုင်ငံလုံး ကျမ်းကျိန် ရမလိုဖြစ်နေပြီ…”
”သေချာတာပေါ့ကွ၊ အပါယ် ၄ ရွာ၊ ဒီဃာယုနတ်၊ ဖြစ်လတ်ပစ္စန်၊ ဉာဏ်မရှိသား၊ ဉာဏ်ရှိသားလည်း ဘုရားမပွင့်ဖြစ်လတ္တံ့တဲ့”
”အပါယ်လေးရွာကတော့ မင်းသိပြီးသားပါ၊ ငရဲ၊ တိရိစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊အသူရကာယ်၊ ဒီဃာယုနတ်ဆိုတာက အသက်မတရားရှည်တဲ့ဗြဟ္မာကြီးတွေကိုပြောတာ၊ ပစ္စန္နရာစ်ဆိုတာကတော့ စစ်ပွဲတွေကြောင့် ပြိုကွဲပျက်စီးနေတဲ့ နေရာတွေပေါ့ကွာ။
အေး အပါယ်ဘုံသားတွေကလည်း အပြစ်ဒဏ်ခံနေကြရလို့ ဘုရားပွင့်ပေမယ့်ဘုရားတရားနဲ့လွဲခဲ့တယ်၊ အသက်မတရားရှည်တဲ့နတ်ဗြဟ္မာတွေကလည်း ွှည်လျှားလှတဲ့ စည်းစိမ်ချမ်းသာကြောင့် အနိစ္စ အနတ္တကိုမမြင်၊ ပစ္စန္နရာစ်ကျတော့လည်း ဒီလောက် သတ်ဖြတ်လုယက် ဒဏ်ရာအနာတရတွေဖြစ်၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးနေကြတာ ဘုရားပွင့်တာနဲ့ကြုံတောင်မှ ဘုရားတရားနဲ့မတွေ့နိုင် ကြဘူး၊ အကုသိုလ် တုံးတွေဆိုပါတော့ကွာ”
”အဲ့ဒီ ဘုရားတရားနဲ့ တရားဥပဒေနဲ့က ဘာဆိုင်လို့လဲ”
”ဆိုင်တာပေါ့ကွာ ဒုစရိုက် ၁၀ ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးမှ ဥပဒေတို့ဘာတို့ရေးထားရတာ”
”ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့တရားစီရင်ရေး ဆိုတဲ့အာဏာသုံးရပ် အပြန်အလှန်ထိန်းညှိ ရတဲ့ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ထဲမှာ အဲဒီသုံးခု လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိပြီး အပြန်အလှန်ထိန်းညှိနိုင်မှ အဲ့ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ငြိမ်မှာ”
”အခု သမ္မတရုံးက အောင်ရဲထွေး အမှုတို့၊ လတ်တလော Victoria. အမှုတို့မှာ ထိန်းညှိပေးနေခဲ့တယ်မဟုတ်လား…”
”အေး..ဒါလည်း ဥပမာအနေနဲ့ ပြောလို့ရတယ်..…၊ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိနေသေးတယ် ….”
”တရုပ်စာရေးဆရာကြီး လူးရွှန်းရဲ့စကားနဲ့ပြောရရင် တော်လှန်ရေးသမားက တန်ပြန်တော်လှန်ရေးသမားကိုသတ်တယ်၊ တန်ပြန်တော်လှန်ရေးသမားက တော်လှန်ရေးသမားကို သတ်တယ်၊ မတော်လှန်ရေးသမားကျတော့ တော်လှန်ရေးသမားကရော တန်ပြန် တော်လှန်ရေးသမားကပါသတ်တယ်..တဲ့၊ တို့ မြန်မာစကားပုံနဲ့ပြောရရင်တော့ ကျွဲနှစ်ကောင်ခတ်တဲ့ကြားကမြေဇာပင်၊ နီးရာဓားကြောက်ရတဲ့ ပြည်သူတွေပေါ့ကွာ”
”အင်း..ဒါနဲ့ဆရာရယ်၊ခုကိစ္စနဲ့ တရားသူကြီးကိစ္စနဲ့က ဘာဆိုင်လို့လဲ”
”ဩော်..ဒီပကိဏ်း ငတုံးနဲ့ကတော့ ပြောရတာ မောပ ကွာ၊ ဟယောင်ရ ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်တဲ့ သူတွေတောင် ဘယာအဂတိကြောင့် ကြောက်လန့်ပြီး အစုလိုက် အပြုံလိုက်နှုတ်ထွက်စာတင်နေတာ ၊ တရားသူကြီးတို့ဘာတို့က နင့်အမေ့လင်အားကိုးရှိလို့လားဟ…”
”တိန်..! လစ်တာပဲကောင်းတယ် ၊ဒေါသအဂတိလာပြီ”
ပြီးပြည့်စုံသော ဒီမိုကရေစီသို့ ကူးပြောင်းရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က Nikkei နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ပြောကြားခဲ့
H1N1 ကြောင့် လက်ရှိအချိန်ထိ ၂၁ဦး သေဆုံး ၊၉၉ ဦးတွင် ရောဂါပိုးတွေ့ထား
ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးမှုအား မြန်မာပြည်သူများက ကျေနပ်နေကြကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ပြော